Kuratidza 5 Common Programming Myths - ITS Tech School
5 Chivabvu 2017
Sezvo shanduro inotsiva mabasa pamusoro pemabhizimusi akasiyana-siyana, mapurogiramu epakombiyuta anowanzodiwa kupfuura chero nguva chero ipi zvayo mumangwana yezvino. Panguva iyo apo unyanzvi ane unyanzvi humwe, kuwana mabasa ekubhadhara mukugadzirira kunogona kunge kusinganetsi kudarika mune dzakasiyana-siyana zvemabhizimisi, izvo zvinoreva kuti vanogona kuraira kugadzirisa zvikwereti uye zvinobatsira.
Asi, sekubhadhara seprogramming mabasa anogona kunge aripo, zvichiri kushaya hanya nezvekupinda purogiramu yeprogram nekuda kwekugara uchingopesana nezvebhizimisi. Heano zvinhu zvishanu zvinyorwa zvitsvene pamusoro pechirongwa uye nei zvisiri zvachose zvakakwana.
Nhema #1: Vadzidzisi ndivo Vose Play uye Hapana Basa
Nyaya dzematafura eping pong uye makamuri ekutamba mumasangano e tech anopa vashandisi zvinonyengera. Chokwadi chinotaurirwa, mapurogiramu anowanzopedza mafuta omukatikati peusiku, achiuya paanogadzirisa mabasa akawanda asingabatsiri.
Vakawanda vanogadzira software vanobata maawa anoenderana, pasinei nokuti vanoshanda kubva kumba kana kupinda muhofisi zuva rimwe nerimwe, kunze kweizvi hazvirevi kuti vanopedza mazuva avo vachitamba. Vanowanzoshanda manheru uye vanoguma kwevhiki, zvikurukuru kana vari pakati pekutsvaga kukuru.
Nhema #2: Vakagadziri vese Vashandi uye Havasi Play
Vadzidzisi vanoshanda zvakaoma - kunyange zvazvo vane vatungamiri vakanaka vanogadzirisa, havadi kupfurikidza netsika yekasa yeHNUMX-awa yevhiki. Zvakakosha kuti vashanduri vepurogiramu vanoona zvinyorwa izvi nezvekutsvaga basa. Bhizimisi rinosundira kumashure kune vatengi vanobatanidzwa mukuwedzera kwekukwezva pakati pekushanda kunobatsira, kana vatsiri vatarisira izvo zvingaisa mumaawa akawanda?
Nekuzivikanwa kune vane zvipo, vanopfuurira purogiramu, vanosimbidzika vanomuka mune chimwe chinhu chisina kukwana sezvazviri murairo vanogona kuisa vaviri vanoenderera mberi uye vanoona basa rakanakisisa rechimiro.
Nhema #3: Vakagadziri vanonzi Antisocial
Iwe unogona kunge wakanzwa kuti vateereri vanoita kuti vanhu vafungidzire vanhu vanoisa maawa akawanda vakasara nekombiyuta uye saga reKeetos. Ita sezvazvingaita, vateereri vemazuva ano vanowanzobatanidza nguva dzose nevanoshanda navo, kuwedzera madzimambo, uye kuguma kwevanhu. Iyi ndiyo nzira yavanowana nayo data pamusoro pe software iyo inofanira kusikwa.
Vakawanda vamiririri vanopedza chikamu chikuru chezuva rega rega rekushanda vachibatana nemashandisirwo emakombiyuta uye zvigadzirwa zvakasiyana. Nenzira iyi, vateereri vechokwadi havakwanisi zvikuru.
Nhema #4: Software Inoita Basa rose
Hongu, kune zvakawanda zvimiti zvinoita kuti zvirongwa zvehupenyu zvirambe zviri nyore. Panzvimbo pokuvandudza sarudzo imwe neimwe kubva pakatanga, vashandi vanoziva kuti vanogona kuvimba nemutemo uripo unoita chikamu chebasa kwavari. Iyi code inotangira kumabhuku ekuraibhurari ayo akafanana neaya iye zvino aedzwa, nemabhugi akashandurwa vasati vatori vashandise muitiro yavo.
Nguva yakawanda sekuraira kwemabhuku aya, vadzidzisi vese vanofanira kunge vane kodzero yekushandura kodhi kuti vakwanise yavo yeimwe nzvimbo yerudo, iyo inogona kugara ichida huwandu hwenyanzvi hukuru kupfuura kukodha kubva pakatanga.
Nhema #5: Vadzidzisi ndivo Math Geniuses
Zvichiitika, sangano risingazivikanwi vadzidzisi vehurongwa semasvomhu masvomhu. Muzvokwadi, kunyorwa kwekodhesi kwave kusina chokuita nekambani dzepasi dzinotora chikoro chesekondari uye chikoro. Izvo zvingaita, zvinoshandiswa zvakasiyana-siyana masvomhu zvinogona kupa chinoshamisa chisisipo chekugadzira code.
Iva sezvazvinogona, nehuwandu hwemakamuri uye makododhi emakodhi anoshandisa kuvaka zvishandiso mazuva ano, convoluted maverengi anogona kugadziriswa zvakanaka zvinyatsobudirira. Pasinei nokuti iwe unofunga kuti iwe hausi kuzviona se nhamba muzvisikwa, zvichida wakawana shanduko yakagadziridzwa yakagadzirwa nemasvomhu uye izvo zvingava chiratidzo chakanaka chokuti chirongwa ndechekuda kwako.
Vadzidzisi vanogona kunge vari nyanzvi dzakawanda dzichigadzirisa mune zvebhizimisi chero ripi zvaro. Chero mamiriro ezvinhu, ivowo vane mabasa anogutsa anovapa nguva yakawandisa, zvakare. Pavanenge vadzidza unyanzvi hwavo uye vachigadzirazve chinoshamisa, vanogona kutumira zvinotyisa kubhadhara mitengo uye livens dzinoita kuti basa rose rakashanda rive rakarurama, pasinei nhamo dzose.
Inquisitive about programming? Wadii kusarudza chirongwa chekudzidza kuti utange kudzidza!
Icho Chinyorwa Chinokosha Zvikuru ZveKushandura Kwemabasa